Semalt Expert: Ahoana ny fialan'ny mpikomy amin'ny famonoan-doza
Ny fikolokoloana dia fomba famotehana izay mitranga amin'ny famitahana ilay niharam-boina mba hikiraoka rohy manokana manimba. Noho izany antony izany dia maro ny mpikaroka sy ny fomba fiasa amin'ny adihevitra amin'ny tranonkala izay manoro hevitra. Ohatra, ny ankamaroan'ny olona dia manana fahalalana fa manindry bokotra na rohy avy amin'ny mailaka manafatra dia mety hitarika ho amin'ny hack. Na dia misy aza ity vaovao ity, dia toa mbola mahavita fahombiazana ihany koa ny mpihetraketraka toy izany. Ohatra, ireo hackers avy ao Rosia dia nahazo ny hack Yahoo amin'ny fampiasana mailaka misy Malware. Ny fanapaha-kevitra momba ny fampahalalam-baovao Demokratika dia vokatry ny sora-pandrefesana iray ao amin'ny tontolon'ny sary iray. Gmail mampihomehy Gmail koa dia lasa mahazatra amin'ny andro tsirairay.
Lisa Mitchell, Semalt Mpitantana Success Manager, nilaza fa ny ankamaroan'ny fanafihana phishing dia miankina amin'ny malware amin'ny fifandraisana na rohy. Ny mailaka dia tokony handresy lahatra ilay niharam-boina mba hanao fepetra hiantsoana an-tsokosoko manokana na tsindrio ny rohy mba hahatongavana any amin'ny toerana hacking amin'ny rafitra. Ny sasany amin'ireo fomba ampiasain'ireo hackers ireo dia ny SQL Injections and Crossing site scripting. Maro ireo tranga izay ahitan'ny olona maro ny karama an-tsokosoko. Ny famonoan-tena dia afaka manazava koa ny fampahalalam-baovao ho an'ny olon-dratsy. Ny sasany amin'ireo fanafihana fanafihan'ny daholobe amin'ity tranga ity dia ahitàna ireo tranga ahafahan'ny olo-malaza mamoaka vola amin'ny olona manohintohina ny sary sokitra.
Aza atao tsindry amin'ny zavatra jamba
Mieritrereta alohan'ny tsindry. Azonao atao ny manalavitra ny ankamaroan'ny fanafihana phishing amin'ny alàlan'ny fisoratana amin'ny ankapobeny ny ankamaroan'ny mailaka manokana. Ohatra, ny sasany amin'ireto mailaka ireto dia mety ahitana virosy izay mety hanimba ny fiarovana ny ordinateranao Amin'ny tranga hafa, azonao atao ny manindry ny rohy ary manamarina fa izy dia olona tena izy.Tsy vokatr'izany, dia hampitombo ny fahalemenao amin'ny fanafihana amin'ny ho avy ianao, ary koa ny fanafihana amin'izao fotoana izao.
Tsy voatery ho an'ny mpitsikilo ny adiresy mailaka ary mety hampihatra ny fanafihana any aoriana.
Aza maimaika ny fitaovana tsy mitady ny valiny. Misy mpizara mailaka sasany toy ny Gmail dia manana fepetra fiarovana amin'ny tranainy sy viriosy, izay mety ho tonga amin'ny mailaka. Ireo mailaka ireo dia afaka manokatra varavarana ho an'ny fanafihana hack. Ho an'ireo mpampiasa Outlook dia mametraha ny tsinjara-tsary tsy ho toy ny default. Ity fanjakana ity dia ny fametrahana ankehitriny ny boaty mailaka saingy mety ho hafa amin'ny mpampiasa sasany. Azonao atao ny mamorona scripts virtoaly ahafahana maka ny navigateur mpampiasa (screenshot).
Asio antoka fa avy amin'ny loharanom-baovao ny mailakao. Ny sasantsasany amin'ireo sehatra izay manodikodinam-bahoaka dia efa voamarika manokana. Noho izany, esory haingana ireo mailaka ao amin'ny lahatahiry spam raha vao haingana. Ankoatra izany, tokony handinika ny fitadiavana ny fahadisoana mety amin'ny fitsipi-pitenenan'ny fampiasana logos ambany ianao. Amin'ny tranga sasany, ny mailaka phishing dia tsy voalohany ary afaka maneho ny tsy fahatanterahana goavana amin'ny fomba ataony ho toy ny mailaka maimaim-poana. Tsara ihany koa ny manome antoka fa ny mpanome tolotra mailaka dia manana fomba fiasa mavesa-danja Source .